Indlu yosapho - iindawo ezinkulu ezivulekileyo kumgangatho osezantsi kunye namagumbi athokomeleyo aphezulu. Imibala eqaqambileyo, ifenitshala yesitayela, ukugqiba iinkuni kwenza indlu ibe yindawo enobungane kunye neshushu. Igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nokuphumla okudityaniswa nekhitshi kunye negumbi lokutyela livumela unxibelelwano oluhle kunye nokuchitha ixesha kunye. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo.
Amagumbi (amagumbi okulala) anenketho yokuvala umnyango. Ngena: 4 pm - 10pm, phuma kude kube 11:00 am (iya kuqinisekiswa nge-imeyile).
Indawo eqhelekileyo kumgangatho ophantsi, amagumbi avaliweyo avaliweyo kumgangatho wokuqala, amagumbi okuhlambela amabini atofotofo kunye nendlu yangasese, indawo enkulu ebiyelweyo ejikeleze indlu - wonke umntu uya kuzifumanela indawo!
Inkcazo yeebhedi: igumbi lokulala elingunombolo. 1: 1 x dbl; igumbi lokulala No. 2: 1 x dbl; igumbi lokulala No. 3: 1 x dbl; igumbi lokulala 4: 1 x dbl, 2 x ibhedi yebhedi (iindawo zokulala ezi-4), iibhedi ezi-2 x zabantwana (ukuya kuthi ga kwiminyaka eyi-10) - uku-odola. Ukuba kuyimfuneko, unokuodola i-mattress ene-inflatable ngaphambili, ngokuxhomekeke kumalungiselelo ahlukeneyo ukuba kukho abantu abaninzi.
Kwigumbi lokulala elikhulu kukho imidlalo yebhodi. Kukho ithala leencwadi eliluncedo kwindawo yokwamkela iindwendwe ephezulu. Emazantsi kwigumbi lokutyela ungafumana isikhokelo malunga neKrakow kunye nommandla ojikelezileyo.
Singakucebisa ngeendawo zokutyela okanye ezinomtsalane.
Le ndlu ibekwe kwindawo ye-buffer ye-Ojcowski National Park, isiqinisekiso somoya ococekileyo, uxolo kunye nokuzola. Indawo ebiyelweyo ikhuseleke ngokupheleleyo ebantwaneni. Iindawo zokuphupha ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokuhamba ngeNordic.
Indawo yokuqala ukuya eKrakow (22 km), eMgodi weTyuwa eWieliczka (50 km), Energylandia (60 km), i-Ojcowski National Park kunye ne-Eagles' Nests Trail (ukuqala: i-Ojców Castle 3 km), iBat Cave (14 km), Błędowska Intlango (33 km), ...
Ukuqhagamshelana ngefowuni nomninimzi akupheli kwaye buqu ukuba kuyimfuneko. Siphinde sikhonze iindwendwe ngoncedo lolwazi, sinokucebisa iindawo ezikhangayo, iindawo zokutyela, ukujonga indawo. Qhagamshelana ngesiPolish nesiNgesi (kunye nam) kunye nesiFrentshi (kunye no-Agnieszka, umququzeleli). UJakub uya kukwamkela kwindawo (ngesiPolish, isiFrentshi).
Ukuqhagamshelana ngefowuni nomninimzi akupheli kwaye buqu ukuba kuyimfuneko. Siphinde sikhonze iindwendwe ngoncedo lolwazi, sinokucebisa iindawo ezikhangayo, iindawo zokutyela, uku…